Nagu saabsan - Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd.
Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2005, oo daboolaya aag dhul ah 14169㎡, aqoon isweydaarsiga ayaa ka sarreeya 11200㎡. Fasalka 100,000 qolka nadiifka ah 4000㎡, shaybaarka 100,000 ee 300㎡ iyo R & D Center 500㎡. Wadarta shaqaalaha waa 200 oo qof.
Maaddaama aan nahay shirkad soo saare ah oo ah badeecooyin caafimaad oo la tuuri karo oo leh ISO13485: 2016 iyo CE oo la caddeeyey, waxaan awood u leenahay inaan u siino macmiilkeenna alaabooyin badan oo ka hooseeya astaanteena ama OEM.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa:Silicone Foley Catheter, Laryngeal Mask Airway, Silicone Caloosha tube, Endotracheal Tube, iwm alaabooyinkeenu waxay ku raaxeystaan ​​sumcad wanaagsan suuqa gudaha. Dhanka kale, alaabtayada tayada sare leh iyo sidoo kale qiimaha macquulka ah iyo keenista waqtiga ku habboon, waxaan ku ballaarinnay ganacsigeenna suuqa adduunka sida Yurub, Koonfurta Ameerika, Aasiya iyo bartamaha-bari.
Kangyuan wuxuu ku guuleystay cinwaan sharafeedka "Xarunta R & D ee Zhejiang High-tech Enterprise" iyo shahaadada FDA ee Mareykanka.
Kangyuan waxaa lagu sharfay inuu yahay "Zhejiang Provincial High-tech Enterprise" Wasaaradda Sayniska iyo Teknolojiyada iyo Wasaaradda Maaliyadda.
Kangyuan wuxuu u wareegay aqoon isweydaarsiga nadiifka ah ee cusub ee 100000.
Kangyuan wuxuu mariyay kormeerka GMP markii seddexaad.
Kangyuan wuxuu mariyay kormeerka GMP markii labaad.
Kangyuan wuxuu maray shahaadada ISO9001: 2008 iyo ISO13485: 2003.
Kangyuan waxay heshay Shahaadada Diiwaangalinta "Tube Endotracheal for Single Use" waxayna ku guuleysatay cinwaan sharafeed "Jiaxing's High-tech Enterprise".
Kangyuan wuxuu mariyay kormeerka GMP markii ugu horeysay.
Kangyuan wuxuu ku guulaystay cinwaan sharafeedka "Jiaxing's Safe Pharmaceutical Enterprise".
Kangyuan wuxuu maray shahaadada ISO9001: 2000, ISO13485: 2003 iyo EU MDD93 / 42 / EEC.
Kangyuan wuxuu helay Shahaadada Diiwaangalinta "Silicone Urinary Catheter for Single Use" iyo "Llaryngeal Mask Airway for Single Use".
Kangyuan wuxuu helay "Shatiga Soosaarida Qalabka Caafimaadka" iyo "Shahaadada Diiwaangelinta Qalabka Caafimaadka".
Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. ayaa si rasmi ah loo aasaasay.